Cabdikariin Guuleed oo ka hadlay dhalinyrada lagu laayay Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Sida Keydmedia Online ogaatay, dhalinyaradan ayay dowladdu u sheegtay in ay u wadayso tababar ciidan hayeeshee waxa ay ku shubtay dabka dagaal u dhaxeeya qabiilo isku diriraya Itoobiya.
Guuleed ayaa yiri, “Wararka la xiriira in askar Dowladda Soomaaliya tababarka ugu dirtay Eritrea in ay ka qeyb qaateen dagaalkii gobalka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya halkaana in badan lagu xasuuqay, waa war hadduu sugnaado aad u culus, xanuun badan, anfariirleh, oo abuuri kara mowjado culus oo dalka dhexdiisa ah. Waa arrin nooga baahan baaris,dabagal dheeri ah iyo hubin.
Waalidiinta walaacsan waxaan ugu baaqaya iney is dajiyaan, oo si miir qableh aan carruurta u wada raadino. Sidoo kale dhinacyada siyaasaddu waa iney u istagaan hawshaan oo aan la sahashan”.